မြန်မာအဘိဓာန်ကို ရထားတာ ကြာပါပြီ။ စာရေးတဲ့အချိန်တွေမှာ တော်တော်အသုံးဝင်လို့ သုံးနေမိတယ်။ စာအုပ်ဝယ်ရင် အခွေပါ ပေးတယ်။ မိမိ ၀ယ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ၀ယ်သုံးတာ။ သူက ပြန်ပေးတာ။ စာအုပ်တော့ မရှိဘူး။ အခွေတော့ ပွားထားတာ။
အခု စာဖတ်သူတွေကို သတိရလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မဖြစ်မနေ ရှိသင့်တဲ့ မြန်မာအဘိဓာန်ပါ။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့က ကြိုးကြိုးစား ပြုစုထားတာပါ။ မိမိကတော့ သဘောကျတယ်။ ကျေးဇူးလဲ တင်မိတယ်။ ဒီမှာ Download ယူပါ။ ဖောင့်ကို ဒီမှာ ယူပါ။
24 ယောက် မှတ်ချက်ပြုသည်:
It can't use at my window 7.
ကျွန်တော်လည်းပဲ Windows7မှာ သုံးမရပါ။
ကျွန်တော့ Windows7မှာ ကြတော့ ရတယ် ဘယ်လိုဖြစ်လည်း မသိ ကျွန်တော် အရင်က ဆို အယ်လ်ကိုလ်ဟော ၁၂၀% နဲ့ သုံးရတာ အခု ဘာမှ ခံသုံးစရာ မလိုတော့ဘူး ကျေးဇူးဗျာ
မိမိကိုယ်တိုင် Window7မှာ သုံးနေတာပါ။ ရပါတယ်။
9:28 AM, November 28, 2009
Windows7မှာဖွင့်လို့မရပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော် Windows XP သုံးလို.မ၇ပါခင်ဗျား
2:26 AM, December 02, 2009
နေ့အိပ်မက်တော့ သုံးလို့ရတယ်.. xp home editionမှာ။ ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်မှန်းကိုမသိဘူး.. ဒီစာအုပ်က ၀ယ်ချင်နေတာကြာပြီ ၀ယ်မရလို့.. တကယ် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
cannot install at window vista
အကိုရေ ကျွန်တော် window vista မှာ သုံးမရဘူးဗျ။လမ်းညွှန်ပေးပါအုံး။
ဒီအဘိဓာန်ကို ဘယ်ဖောင့်နဲ့ သုံးရလဲမောင်စေတနာ၊ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် အကွက်မှာ စာတွေကို ကောင်းကောင်း ဖတ်လို့မရဘူး၊
11:02 PM, April 19, 2010
Win Font အကုန်လုံး ဖတ်လို့ရပါတယ်။
10:29 AM, April 20, 2010
ဦးရဲ့ ကွန်ပြူတာက xp ဦးရဲ့ မိန်းမစာမျက်နှာမှာ သုံးလို့ရ ပြီး ဦးစာမျက်မှာတော့ ပြသာနာဖြစ်နေတယ်၊ အဓိပါယ်ဖွင့် ဆိုချက်အကွက်မှာ ကျောက်စာလိုလိုမျိုးပေါ်နေတယ်၊ အဲဒါ ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ကူညီပေးပါအုံး၊
win7SP 1 .... သုံးလို့မရပါခင်ဗျာ...
8:58 AM, July 27, 2011
Nay Moe Yor said...
မောင်စေတနာကိုမေးပါ ရ စေ နော်
စေတနာဟူသည် ၂မျိုး၊ကုသိုလ်၊အကုသိုလ်၊ ဘယ်စေတနာ?လူတိုင်းထိုက့်ရင့်ရှင်းနိုင်စေ? ဗုဒ္ဓဘာသာထင့်မိလို့.............
2:25 PM, November 02, 2013
2:34 PM, November 02, 2013
site disable တဲ့ ဖောင့်ဒေါင်းမရဘူး
4:09 PM, August 12, 2015
oo lay said...
3:18 AM, November 26, 2015
ဒါလည်းမရဘူး။ယီးပဲ ဝိုင်းဆဲကွာ :)
3:26 AM, November 26, 2015
3:36 AM, November 26, 2015
ဒီအဘိဓာန်ကို ဘယ်ဖောင့်နဲ့ သုံးရလဲမောင်စေတနာ၊ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် လေးထောင်အကွက်တွေပဲပေါ် ပေးထားတဲ့ဖာင့်ကလဲ ဒေါင်မရပါ
1:21 PM, September 28, 2016
sayar si said...
font က link သေသွားပြီ ပြန်တင်ပေးပါနော်
1:22 AM, December 08, 2016